Al-shabaab oo si rasmi ah u sheegtay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho
Muqdisho:-Waxaa goor dhow shirjaarid ku qabtay magaalada Muqdisho Afhayeenka ururka Al-shabaab Sh. Cali Maxamuud Raage Shiikh Cali Dheere isagoo sheegtay qaraxii maanta ka dhacay xarunta wasaarada hargaha iyo saamaha.
Afhayeenka ururka Al-shabaab Shiikh Cali Dheere ayaa sheegay in qaraxa ay fuliyeen guutada Istishhaadiga ah ee ciidanka Al-shabaab isagoo sheegay in cadowga ay dhabarka ka jabsheen.
Afhayeenka ururka Al-shabaab Sh. Cali Maxamuud Raage ayaa sheegay in xarunta wasaarada hargaha iyo saamaha ay saldhiga u ahayd sirdoonka DFKM iyo kuwa reer Galbeed ah isagoo sheegay in qarax maanta hadafkii la rabay laga gaaray in badan ay sirdoonka Al-shabaab ay isha ku hayeen goobta maanta qaraxa lala beegsaday.
Afhayeenka ururka Alshabaab Sh. Cali Dheere ayaa beeniyey in qofka qaraxa fuliyey uu u dhashay dalka Kenya sida uu xusay Sarkaal u hadlay DFKM , Shiikh Cali ayaa waxaa uu sheegay in qofka qarax fuliyey uu yahay wiil arday ah oo Muqdisho wax ku bartay laguna magacaabo Bishaar C/llaahi Nuur.
Afhayeenka ururka Alshabaab Sh. Cali Dheere ayaa beeniyey in qarax maanta ay ku dhinteen arday imtixaan soo eeganaysay isagoo arrinkaas ku tilmaamay been abuur ay faafinayaan madaxda DFKM.
Afhayeenka ururka Alshabaab Sh. Cali Dheere ayaa ugu baaqay shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho in ay ka fogaadaan xarumaha ay degan yihiin madaxda DFKM si aan weerarada dhib uga soo gaarin isagoo ku nuux nuuxsaday in ay dadka u turayaan aysan jeclayn in qof muslin ah uu weerarada ay geysanayaan uu ku dhinto.
alle waa midka abuuray geerida una abuuray aduunkiisa gaal iyo muslim ahna mid uu ku ihaanaynayo umadda haddana waa in dadku garanayaan geerida maxaa ka dambeeya umada ku dhimatay muqdsho waa mid naxdin leh kuwa u arka inay ahaayeen gaalo ama oranaya shuhado allaha ka dhigo intuba waa inay ka fakiraan sidee uga bix karnaa